UngaluPhucula njani i-e-Commerce yamava abaThengi | Martech Zone
Ungayiphucula njani i-e-Commerce yamava abaThengi
NgoLwesihlanu, Meyi 10, 2019 NgoLwesithathu, Oktobha 14, 2020 USmith Willas
Abathengi sisiseko salo naliphi na ishishini. Oku kuyinyani kumashishini azo zonke nkqo, imimandla kunye neendlela. Abathengi kubalulekile kuwo onke amabakala enkqubo yeshishini lakho. Iinjongo zeshishini, amacebo, kunye nemikhankaso yokuthengisa yeempawu eziphambili zikhonkxiwe malunga neemfuno kunye nokukhethwa kwabathengi babo kunye nabaphulaphuli ekujoliswe kubo.
Abathengi kunye ne-eCommerce Environment
Kwiminyaka eqhutywa kukufakwa kwikhompyutha, ubuchwephesha beselfowuni, kunye nokhuphiswano olunamandla, awunakukujonga ukubaluleka kwabathengi. Ngaphezulu kwe-5 yabakhuphiswano bakho banikezela ngeemveliso kunye neenkonzo ezifana nezakho kumthengi ofanayo nangaliphi na ixesha. Imveliso oyinikezayo kufuneka ikhetheke kwaye inomdla kubasebenzisi bakho, ukunqanda ukuphoswa lithuba lokuthengisa.
Eyona nto iphambili ekuqhubeni apha ngamava abathengi bakho kunye nemveliso kunye nenkonzo yabathengi. Eyona nto ibhetele ngamava, amathuba amaninzi okuthengisa.
Ama-70% amava okuthenga asekwe kwindlela abathengi abaziva bephathwa ngayo.
Ubungqina, Ukuzibandakanya kwabaThengi: Izibalo ezili-10 kunye neziBakala zokuPhucula isiCwangciso sakho
Amashishini abonayo anokholo olomeleleyo lokuba ngokunikezela ngamava kubathengi abangcono, baya kuba nakho ukulugqwesa ukhuphiswano lwabo kunye nokuseka ukuthembela kubathengi kwaye; ekugqibeleni, ukufumana abathengi ngakumbi ngomlomo.
Kwifilosofi, i-eCommerce yi lula kubathengi. Bakhetha ukuthenga kwi-Intanethi kuba kulula, kuyabiza, kwaye kugcwele ukhetho. Uphuhliso kwicandelo lokhuseleko lwedatha luvumela iindlela ezikhuselekileyo zokuhlawula, ngelixa uvimba amathuba obuqhetseba kwi-Intanethi ahambelana nokuthenga kwi-Intanethi. Oku kukhokelele ekunyukeni kwentaba kwintengiso ye-eCommerce kunye nengeniso.
Intengiso ye-eCommerce inokuthi ifike kwi-4.3 yezigidigidi zamanqaku ukuphela kuka-2021.
Ivenkile, Incwadi yokudlala ye-Ecommerce yokudlala
Ukufikelela apho, i-eCommerce kufuneka ibhinqe ibhanti yayo kwaye isete kuhambo lokuphucula-ukubonelela nge amava omthengi aphezulu. Amava akho kubathengi kufuneka anyuse amanqanaba okwaneliseka kwabaxumi ngokubanzi ukongeza kukwanda kwengeniso yakho.
I-80% yabasebenzisi ayinakuthengisa nenkampani ngenxa yamava abathengi abahluphekileyo.
Hubspot, Inyaniso Enzima Ngeendleko Zokufumana (kunye nendlela abaThengi bakho abanokuGcina ngayo)
Eli nqaku lichaza ezinye zeendlela ezilungileyo ezinceda ukuphucula amava abathengi bakho kunye neshishini lakho le-eCommerce.
Phuhlisa amava aSebenzisayo ngobuhlobo
Ukusuka kwiwebhusayithi / iphepha lasekhaya kwiphepha lemveliso kunye nakwinqwelo ukukhangela iphepha, amava omsebenzisi kwiwebhusayithi yakho kufuneka angabi nasiphako. Abathengi bakho kufuneka bakwazi ukwenza nantoni na abafuna ukuyenza.
Nokuba bazama ukungabinanto kwinqwelo yabo, inkqubo kunye nokuhamba kufuneka kuyilwe ngokucacileyo kwaye kuchazwe ukuze bangakufumani kudideka ukusebenzisa iwebhusayithi yakho. Kuya kufuneka uyile iwebhusayithi yakho okanye usetyenziso olusuka kubathengi. Kuya kuba lula kubasebenzisi bakho bewebhu, hayi wena kuphela.
Kufuneka kubekho iqhosha lokukhangela ukunceda abathengi ukuba bafumane imveliso abayifunayo. Izigaba, izihloko zamaphepha, amagama aphambili kwimveliso, iithegi, imifanekiso yemveliso, kunye nezinye iinkcukacha- yonke into kufuneka ifakwe kulungelelwaniso lwabasebenzisi. Cingisisa ngokuhambisa ulwandiso lokukhangela kwi-eCommerce ukwenza ukhangelo olukhawulezayo nolulula kwiwebhusayithi yakho.
Nika iindlela zokuKhusela eziKhuselekileyo
Iindlela zokuhlawula kwivenkile yakho ye-eCommerce kufuneka ikhuseleke, ikhuseleke kwaye ingabinangxaki. Ngelixa uthenga kwi-Intanethi, abathengi bafuna ukwazi idatha yabo yobuqu neyemali ikhuselekile.
Yongeza uninzi lweendlela zokuhlawula kwivenkile yakho kangangoko kunokwenzeka. Intlawulo yekhadi letyala / lokuthenga ngetyala, ukuGqithiselwa kweBhanki, ukuHanjiswa kweKheshi (i-COD), i-PayPal kunye ne-e-Wallets ziindlela ezithandwayo zokuhlawula kwezi ntsuku. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba i-portal yakho ivumela abathengi bakho ukuba bahlawule ngayo nayiphi na kwezi ndlela zokuhlawula.
Okona kubaluleke kakhulu, kuya kufuneka uqinisekise iphepha lakho labatyeleli kunye nabathengi ukuba zonke iindlela zakho zokuhlawula zikhuselekile kwaye zikhuselekile. Tyala imali ekufumaneni izatifikethi zokhuselo ezininzi kule ndawo kwaye ubeke ezo bheji kwiwebhusayithi yakho / usetyenziso njengezalathiso zokuqinisekisa abathengi bakho ukuba idatha yabo ikhuselekile nawe.
Tyala imali kwisango lokuhlawula eliza neendlela zokhuselo ezininzi. Encryption yedatha ebonelelwe ngumthengi iya kuqinisekisa ukuba intengiselwano yabo ikhuselekile. Sebenzisa isango lokuhlawula kuqinisa idatha yakho yomthengi kunye neshishini, kwaye kunciphise amandla kunye nokuphindaphindeka kwezisongelo zobuqhetseba kwi-Intanethi.
Yenza inkqubo yokuKhangela engenaKhono
Uninzi lwamaxesha, isizathu sasemva kwe- inqwelo elahliweyo kukuphuma okuntsonkothileyo inkqubo. Inkqubo yokukhangela kwiwebhu yakho okanye usetyenziso kufuneka ibe mfutshane, ilula kwaye ikhawuleze. Ngapha koko, umsebenzisi kufuneka abenakho ukubona inqwelo yakhe yokuthenga kwiphepha ngalinye ukuze ayazi indlela yokugcwalisa iodolo.
Umzi mveliso wecommerce ulahlekelwa ziidola ezingenakubalwa unyaka nonyaka ngenxa yeenqwelo ezilahliweyo okanye ukurhoxiswa kwentlawulo ngexesha lokuphuma. Unokuhambisa oomatshini bokuzenzekelayo ukulinganisa iintsingiselo zasemva kweenqwelo zokuthenga ezilahliweyo ukuphucula iziphene ezikhoyo kwinkqubo yakho yokuphuma.
Ngexesha lokuphuma, umthengi kufuneka akwazi ukubona ixabiso lenqwelo yakhe kunye neentlawulo zokuhambisa ezifanelekileyo. Eli phepha kufuneka libonise ulwazi malunga nokunikezelwa kunye nezikhuphoni zesaphulelo ezifanelekileyo kumsebenzisi.
Abaxhasi bahlala bexhalabile malunga nokuhanjiswa kweodolo yabo. Batsalela umnxeba ukujonga inqanaba lokuthunyelwa kwabo.
Sebenzisa i-suite ehamba phambili yokuhambisa kuya kunceda ishishini lakho le-eCommerce linxibelelane nabaphethe izinto ezininzi kwaye likuvumela ukuba wenze imigaqo yokuhambisa eguqukayo- ngokweeodolo ezahlukeneyo, indawo zabathengi, kunye nezinye izinto ezibalulekileyo-kwideshibhodi enye.
Ukuba ishishini lakho lihambisa okanye lihambisa imithombo evela phesheya, ke kunyanzelekile ukuba indawo yakho yokuthumela izinto zithunyelwe ngaphandle okanye zithunyelwe ngaphandle. Konke oko kunceda ukuba wenze amava angcono kubasebenzisi bakho xa kufikwa ekuthumeleni nasekuhambiseni iodolo.
Okokugqibela, ivenkile ye-eCommerce kufuneka iqinisekise ukuba akukho xesha lokuphumla kwaye akukho kuncipha ngexesha lenkqubo yokuphuma ukunqanda iimeko zokulahlwa kwenqwelo yomzuzu wokugqibela.
Hambisa Inkonzo yaBathengi abaPhezulu
Ukuphucula amava abathengi, kufuneka ujolise ekunikezeleni inqanaba eliphezulu lenkonzo yabathengi. Ngokuqinisekileyo oku kuya kubandakanya ukuthengisa kwangaphambili kunye nenkonzo yokuthengisa emva kokuthengisa.
Misela iqela labantu abathandekayo ukufumana idesika yokuxhasa abathengi bakho. Xhobisa ngezixhobo zeCRM eziphambili ze-AI-kufuneka ukuba zibe nesuti kumashishini anamhlanje eCommerce- ukuze bakwazi ukuphatha ngokufanelekileyo imibuzo yabathengi kunye nemicimbi.
Khawufane ucinge ngemini exakekileyo kunye nolayini omde wabathengi abalinde ithuba labo lokuthetha nearhente yakho yokuxhasa abathengi!
Ukuba nengxoxo ye-AI enikwe amandla endaweni kugcina ixesha lamagosa akho, ukongeza, ukuvumela ukuba bagxile kwezinye izinto eziphambili zenkqubo yakho yokuxhasa abathengi. Iincoko zinokuphatha ngaxeshanye iifowuni / iincoko ezininzi kwaye zisombulule ngokukhawuleza imiba eqhelekileyo njengokuqinisekiswa komyalelo, ukurhoxiswa, ukubuyiselwa, ukubuyiselwa kwemali, iinkcukacha zokuhambisa ngenqanawa, njl.
Ukuphakamisa ukuKhangela kunye nokuSebenza kweNtlalontle / ukuThengisa
Ngendlela efanelekileyo yokukhangela i-injini yokukhangela kunye nentengiso, unokunceda abaphulaphuli bakho ekujolise kubo bafumane into abayifunayo kwiinjini zokukhangela, ezinje ngeGoogle kunye neBing. Ukuba i-eCommerce backend yakho ayikakulungeli i-SEO, ungasebenzisa umgangatho olungileyo we-eCommerce SEO ulwandiso kwaye usebenzise iindlela ezizezona ziyinyani ze-SEO ukuze uvele kwiziphumo zokukhangela eziphambili kwiinjini eziphambili zokukhangela.
Ishishini lakho le-eCommerce lingasebenzisa imidiya yoluntu ngeendlela ezininzi:
Ku Khuthaza iimveliso zakho, iinkonzo, inkcubeko yenkampani, kunye nokunikezelwa;
Ku xhuma nabaphulaphuli bakho kunye nabathengi;
Ku lalela kubathengi bakho abanganelisekanga kunye nokusombulula imicimbi yabo kwiiportal zikarhulumente; kwaye
Ku ezithengisa ii (brand) zakho
Kuya kufuneka usebenzise olona nxibelelwano lusebenzayo kwishishini lakho, fumana kwaye uqhagamshele kunye nabaphulaphuli / abathengi bakho. Ukulungiselela abathengi bakho, unokongeza iphepha lokujonga kwakhona, ukuvumela ukuphawula kunye nokuthumela eludongeni kubathengi, kunye nokwenza ivenkile kunye nokuthengisa kwinethiwekhi yoluntu.
Ngaphandle kokubonelela ngokulula, indawo ekhuselekileyo kunye nokwenza izinto elubala, unokubonelela ngezindululo zakho kubatyeleli bakho nakubathengi abakhoyo ukuphucula amava. Ngale nto, kuyakufuneka usebenze ngezixhobo ze-AI kunye neML ezinokufunda kwindlela yokuziphatha kwabasebenzisi kwi-Intanethi kwaye zikuncede ucebise ngemveliso elungileyo kumthengi olungileyo. Kufana nokunikela / ukucebisa ngento enokukhangelwa ngumsebenzisi.
USmith Willas ngumbhali osebenza yedwa, ibhlog, kunye nentatheli yemidiya yedijithali. Unesidanga solawulo kuLawulo lweeNtengiso kunye noLawulo lweMisebenzi kunye neNtengiso kwaye uqhayisa ngemvelaphi ebanzi kwimidiya yedijithali.